Dalka Kazakhstan oo qabri laga helay dahab qiimo badn gaadhay iyo qalabkii dagaalka laakiin nasiib daro lama garnayo ninkan geesiga hogaamiyaha ahaa, | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Dalka Kazakhstan oo qabri laga helay dahab qiimo badn gaadhay iyo...
Dalka Kazakhstan oo qabri laga helay dahab qiimo badn gaadhay iyo qalabkii dagaalka laakiin nasiib daro lama garnayo ninkan geesiga hogaamiyaha ahaa,
Dowladda Kazakhstan ayaa sannadkan dib u aasi doonta haraadiga meydka nin halyeey ah oo ka mid ah dadkii qarniyadii hore ku fiicnaa dhinaca dagaallada, iyadoo rajo laga qabo in Jiilasha dambe ay awood u yeelan doonaan sidii lagu ogaan lahaa qofka uu ahaa.
Telefishinka qaranka ee dalka Kazakhstan ayaa shaaciyay warkan ku saabsan ninka dagaal yahanka soo ahaan jiray ee lafihiisa ay aqoonsan kari waayeen Seynis yahannada caalamka.
Khubarada ku xeel dheer taariikhda bani’aadamka ayaa haraadiga meydkaas soo qufay sannadkii 1969-kii, waxayna qabrigii uu ku jiray ka soo saareen dahab aad u fara badan, kaasoo ka sameysnaa gaashaanka iyo hubka kale ee uu isticmaali jiray dagaal yahankaasi.
Howlgalka lagu soo saaray meydkaas taariikhiga ah ayaa ka dhacay magaalada issyk kurgan ee koonfurta waddankaasi.
Tan iyo markii uu dalkaas qaatay xornimada sannadkii 1991-kii, wuxuu meydkan noqday astaan uu leeyahay dhaxalka taariikheed ee dalka Kazakhstan. Lafihiisa iyo qalabkiisa dagaalka ayaa boos weyn ka qaatay Madxafka qaranka ee ku yaalla magaalo madaxda Astana.
Wuxuu sidoo kale soo jiitay dalxiiseyaal fara badan oo ka soo kala jeeda caalamka, kuwaasoo daawasho ugu imaanayay.
Hase ahaatee wax badan lagama garanayo qofka uu ahaa ninkaasi, waxayna cilmi baareyaashii soo saaray meydkiisa ku mashquuleen dahabka la aasnaa, iyagoo aan diiradda saarin haraadiga meydkiisa.
‘Nabad ku Naso’
Lafaha ayaa mar dhow uun dib looga helay machad lagu keydiyo haraadiga dadkii hore, waxayna ku jireen kartoon caadi ah oo afka ka furan.
Kartoonkaas ayey dusha uga qorneyd “Ninkii dahabiga ahaa, Nabad ku Naso”.
Waan ognahay in da’diisa iyo jinsiga uu yahay la heli doono, iyadoo Tijaabada hidda sidaha DNA ay na siin doonto macluumaad buuxa,” ayuu yiri cilmi baare lagu magacaabo Dosym Zikiriya oo la hadlay warbaahinta Kazakh TV.
Balse Yermek Zhasybayev, oo ka howl gala madxafka Issyk Museum ayaa isla telefishinkaas u sheegay in rajo aad u kooban laga qabo arrintaas. “Lafahan aad bay u hallaabeen. Muddo 50 sano ah ayaa lagu dhex hayay kartoon caadi ah oo afka ka bannaan, waxaana galay bakteeriyo iyo feyrus. Hadda suuragal ma aha in DNA ay soo saarto macluumaad – waxaa fiicnaan lahayd inaan heli karno qalfoofta madaxa ama hal ilig xitaa”.
Seynis yahannada, oo gacanta ka taagtay macluumaadka ku saabsan haraadiga ninkan la aqoonsan waayay, ayaa sheegay in rajadooda kaliya ee harsan ay tahay in la iska aaso lafaha, si loo sugo horumarka tiknoolojiyadda oo xilli dambe suurta galin kara in wax dheeri ah laga ogaado lafaha oo sidooda ah.
Ujeeddada ugu weyn ayaa ah in la aqoonsado qofka rasmiga ah ee uu yahay halyeygan dagaal yahanka ahaa.
Previous articleSiyaasi baashe cali jaamc oo Eedo horleh u Jeediyay Xukuumada somaliland
Next articleWasiirka Arimaha Dibada Somaliland Oo Dib Ugu Soo Laabtey Dalka